स्वास्थ्य र सुन्दरताका लागि बडी बिल्डिङ - अन्तर्वार्ता - नारी
रजनी श्रेष्ठ, बडी बिल्डर्स
बडी बिल्डिङ किन र केका लागि गर्नुहुन्छ ?
म आफ्नो स्वास्थ्य र सुन्दरताका लागि यो खेलमा संलग्न छु । शारीरिक रूपमा फिट हुन र आत्मसन्तुष्टिका लागि बडी बिल्डिङ गर्छु ।
यस्तो बडी बनाउन कति समय लाग्यो ?
कठिन परिश्रमका साथ पाँच वर्ष ।
दैनिक कति र के–के खानुहुन्छ ?
के बडी बिल्डर्सहरू थुप्रै सन्तान चाहन्छन् ?
मेरो एउटा १९ वर्षीय छोरा छ । ऊ अहिले एमबीबीएस पढ्दैछ । मलाई पनि दुईवटासम्म बच्चा भएको मनपर्छ । छोरी भएकी भए मजस्तै बडी बिल्डर्स बनाउँथें ।
जिममा सबैभन्दा बढी मनपर्ने र चलाइरहने इक्विपमेन्ट्स ?
हरेक इक्विपमेन्ट्स हाम्रा लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् । म बढी एप मेसिन चलाउँछु ।
तपाईंले कहिल्यै भिटामिन सप्लिमेन्ट्स लिनुभएको छ ?
सप्लिमेन्ट्समा प्रोटिन, फिस आयल, मल्टी भिटामिन, प्रि–वर्क आउट आदि मसल टेकका उत्पादन प्रयोग गर्ने गरेकी छु ।
बडी बिल्डर्सले गर्ने मेकअपले प्राकृतिक छाला र सुन्दरतामा असर गर्दैन ? त्यसको चिन्ता हुन्छ कि हुँदैन?
ट्याग कलरले छालालाई कुनै असर गर्दैन । पखालेपछि गैहाल्छ । त्यसैले सुन्दरता बिग्रने कुनै चिन्ता हुँदैन ।
बडी बिल्डर्स हुँदाको पछुतो र खुसी ?
बडी विल्डर्सका नाताले देशलाई केही दिन नसकिने पो हो कि भन्ने चिन्ता भैरहन्छ तर मैले अन्तर्राष्ट्रिय स्पर्धामा समेत पदकहरू ल्याउन सकें । त्यसमा भने गर्व महसुस हुन्छ ।
आफ्नो कुन अंगसँग खुसी हुनुहुन्छ ?
हरेक अंग अमूल्य छन् तसर्थ म आफ्ना हरेक अंगसँग खुसी छु ।
रिङमा गर्व लाग्ने क्षण ?
मेडल हातमा लिँदा म त ब्ल्याकआउट नै हुन्छु ।
एउटी श्रीमती, आमा, बुहारी तथा बडी बिल्डर्समध्ये कुन भूमिका कठिन ?
बडी बिल्डर्स नै कठिन छ किनभने यसमा हरेक कुराको रुटिन हुन्छ । कडा परिश्रम नगरी अघि बढ्न निकै गाह्रो छ ।
महिला बडी बिल्डिङको क्षेत्रमा तपाईंको आइडियल ?
नेपालकी ननिता महर्जन तथा रसियाकी जुलिया ।
मंसिर ११, २०७६ - जाडो र स्वास्थ्य